Java wali way u nugul tahay 0-maalin inkasta oo la cusbooneysiiyay. | Laga soo bilaabo Linux
Toddobaadkan waxaa aad looga hadlay Java. Waxaa jiray hadal bilowgii nooca 7 cusboonaysiinta 10. Inay aad u nugul tahay. Sidaas bay u jilicsanayd oo muhiim u ahayd, in badan ayaa ku taliyay in si buuxda loo rakibo Java kombiyuutarradooda.
0-maalin Un weerar eber-maalin ah (Af-ingiriisida weerar eber-maalin ah ama weerar 0-maalmood ah) waa weerar ka dhan ah dalab ama nidaam ujeedkiisu yahay in lagu fuliyo koodh xun iyadoo lagu mahadinayo aqoonta u nuglaanta ee, guud ahaan, aysan ka warqabin dadka iyo soo-saaraha sheyga Tani waxay u maleyneysaa inaan weli la hagaajin. Noocan ah loogana faa'iidaysto waxay guud ahaan ku dhex wareegtaa safafka weerarada dhici kara ilaa ugu dambayn lagu dhajiyo fagaarayaasha bulshada. Weerar eber-maalin ah ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay mid ka mid ah aaladaha ugu halista badan ee a dagaalka kumbuyuutarka1
Jilicsanaanta ayaa ahayd mid aad u daran tan iyo markii ay ogolaatay fulinta iyo rakibida barnaamijka softiweerka iyadoo uusan isticmaaleha ogeyn, tan ayaa ogolaatay in la xado, iyo in ficil ahaan wax la sameeyo.
Maalmihii ugu dambeeyay "xariifnimada" Oracle waxay sii daayeen noocyadooda cusub iyadoo loo maleynayo in balastar loogu talagalay 0-maalin loo yaqaan Java 7 update 11.
Laakiin qaar badan ayaa sheeganaya in nuglaanta wali ay sii socoto. Ama halkii, si buuxda looma dhejin. Sida laga soo xigtay khubarada, waxay yiraahdaan waxay qaadan kartaa Oracle illaa 2 sano si buuxda loogu hagaajiyo u nuglaanta.
Laga soo bilaabo Oracle waxay na siinayaan inaan aadno qeybta xakamaynta Java oo aan hagaajino heerka amniga oo aan ka gudubno dhexdhexaad ilaa sare tanina waxay sii adkeyneysaa in la fuliyo koodh xun iyada oo aan la oggolaan. Laakiin iska jir "Way sii adkeyneysaa" Ma joojin doono.
Aniga shaqsiyan waxaan dhahay waqtiga Java waa dhamaaday. Tan iyo markii aan aqriyay baloogyada Java marwalba waxaa la muujiyaa inay aad u nugul yihiin runtiina marna ma ogaan karo inaan Java rakibay iyo in kale. Waxaan ula jeedaa ma arko farqiga. Aniga shakhsiyan waan furey waqti dheer kahor noloshayduna wali waa sidii. Nabdoon dabcan 😀
Waxaan kugula talin lahaa hadii aad tahay dadka isticmaala desktop. Caadi iyo duurjoog, ha rakibin Java. Waxaan ku filan nahay Flash.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Java wali way u nugul tahay 0-maalin inkasta oo la cusbooneysiiyay.
Ma aqaano sababta aan u dhoola cadeynayo yar markaan akhriyayo tan. Malaha waa aniga; D
Waxaan nahay labo hehehe
Xitaa ma furanjdk?
Haddii aad sameyso bangiga guri ama aad isticmaasho bogag adag waxay u badan tahay inaad u baahan tahay inaad ku rakibto Java si aad u isticmaasho - Java RTE, ma aha OpenJDK halkaasoo inta badan bogaggan aysan ka shaqeyn.
Haddii msx sax yahay, sidoo kale kiiskeyga tusaale ahaan waxaa lagama maarmaan ah in la galo nidaamka darajooyinka iyo diiwaangelinta koorsooyinka jaamacadeyda. Dhanka kale, ha u qaadin waddo qaldan, laakiin ma dhigi kartaa ilaha sheeganaya in u nuglaanta wali sii socoto cusbooneysiinta ka dib? Waxaan xiiseynayaa inaan waxbadan barto maadaama isticmaalka java uu yahay shar shar ah.
Waxaan waligay ahaa kan ugu weyn ee waxyeelleeya Java qaybahaas. Runtu waxay tahay in nuglaanta nugul ee noocan ah markasta ay ku soo muuqdaan luqaddan taasina waa mid ka mid ah sababaha badan ee aan u diidanahay adeegsiga wax soo saarka tayada liita.
Kaalay, waqti dheer kuma qaadanayso in mid ka jawaabo in Java kani yahay, in Android yahay kan kale ... in Java laga xishoodo.
Saxitaan yar: waxa aan amaan ahayn ma aha luuqada (taas oo fasaladeeda iyo kiiska awrku ay tahay wax laga naxo, taasi waa) laakiin waa mashiinka kumbuyuutarka ah ee Java lagu soo ururiyo duulimaadka.
Sida iska cad qaladkeyga aanan cadeyn, mararka qaar waxaan u muuqdaa inaan wax badan ka sheego.
Laakiin ma jecli wax walba oo Java ku lug leh.
Oo ay ku jiraan argagaxa, gaabiska, qadiimiga ah iyo xanuunka dalvik ee ay adeegsato android.
Ugh, way fiicantahay in la helo dad fikir leh oo aan laga baqin inaad wax u sheegto sida ay yihiin.
Nasiib wanaagse, mustaqbalku wuxuu ku rajo weyn yahay tiro badan oo beddelaadyo ah oo ku jira heerkoodii ugu dambeeyay ee bislaanshaha: D: D
Waa waqtigii Java oo dhan lagu beddeli lahaa Python ... waxaan qabaa. Sida uu qoruhu sheegay, waqtigii Java ayaa dhammaaday.
Taasi haddii aan oggolaado Python xitaa uma baahna in la soo ururiyo, laakiin sidee baan u soo dejinayaa aniga oo aan jdownloader lahayn?, Tucan aniga ima shaqeyso aniga iyo ratfat ka sii darran, yaa ku talinaya barnaamij dejineed oo badan oo borotokool ah oo ay ku xiran yihiin iskuxirka depositfile?
Waxaan rajeynayaa in madaxeygu uusan aqrin tan .. hadii aanan u hureynin inaan ku iibiyo farsamada gacanta fagaaraha… hehehe
Hagaag warka; si kastaba ha noqotee, boggaga aan ka akhriyey u nuglaanta Java, waxay u digayaan oo keliya adeegsadayaasha Windows iyo OS X, ma arag wax xusid ah GNU / Linux, si kasta ha noqotee, sida wax walba, shahaadada Khatarta ay u taagan tahay waxay ku xirnaan doontaa daalacashada iyo nabadgelyada. Dhinaca kale, anigu si aad ah ugama cadayn naafaynta iyo / ama ka tirtirka Java gebi ahaanba, maaddaama oo keliya ay adeegsadaan biraawsarayaashu; haddii aad si dhow u fiirsato, qolalka 'LibreOffice' iyo 'OpenOffice' ayaa rakibay oo u isticmaalaya si caadi ah, markaa ma hubo sida ay waxtar u yeelanayso "ka-saarista", haddii qof uu leeyahay fikrad sax ah oo ku saabsan arrinta, waan ku qanacsanahay inaan sharraxaaddeeda si faahfaahsan u bixiyo.
Linux IS nugul:
In kasta oo aad yareynayso halista adigoon booqan bogagga amniga shaki ku jiro, infekshinka waxaa sababi kara xaqiiqda fudud ee booqashada bog waxyeelleeyay (websaydhka dugsigaaga, dukaan ganacsi, iwm.).
In kasta oo Linux ka amni badan tahay, ha quudin khuraafaadka ah inuu lama taabtaan yahay.
GNU / Linux waa aamin, amni darradu waa Java.
Windows ma ahan mid amni leh Java ama la'aan.
Haddii aad ka tagto server-ka SSH oo ka furan dekedda 22 adoo adeegsanaya xididka oo aan lahayn lambarka sirta ah, waxay si macquul ah u galayaan sidii Pancho guriga.
Ma jiro cunto FUD ah.
Anigana waxaan raaciyey: dhibaatada Java waa shuruudaha heerka hoose ee mashiinka farsamada, iftiinkan cusub waxaa iska cad in:
Mashiinka dalwaddu wuxuu ubaahan yahay helitaan heer-hoose ah oo nidaamka ah si uu ushaqeeyo, taas lafteedu waa qalad naqshad iyo vector weerar tan iyo markii nidaamka (GNU / Linux kiiskan) uusan lahayn qaab uu kudhaqmo ama isku difaaco maadaama uu macno ahaan yahay furayaasha Java.
Caqli ahaan, haddii mashiinka kumbuyuutarka ah uu codsado helitaanka aan xadidnayn ee nidaamka si uu u shaqeeyo, tani waxay noqon doontaa barta ugu daciifka ah ee nidaamka laftiisa iyo amniga guud ee nidaamka waxaa lagu calaamadeyn doonaa amniga codsiyada u baahan in lagu ordo booska kernel ama meesha isticmaalaha mudnaan.
Diiwaangeli naftaada, akhri, fahmi oo - fadlan - ha ku faafin FUD.
Ilaa iyo inta aan xasuusto ama fahmo ma jirto waddo uu codsi kasta uga heli karo heer hoose oo ficil ah Kernel.
Waan aqriyay laakiin hada ma xasuusto meesha iyo runta oo ah in aanan aqoon ku filan oo aan ku bilaabi karo ka doodistiisa ... Aad uma lihi masuuliyad daro, laakiin waxaan doonayay inaan ka faaloodo si kasta.
Waxaan haystaa libreoffice mana rakibin java.
Xaaladda Windows, waxay ku dhacdaa XP iyo 7. Windows 8 iyo Explorer 10 dhibaato la'aan. Barta kumbuyuutarka Linux waxaan horey ugu naafadiyey biraawsarada, haddiiba ay dhacdo.
Hagaag, hadaad Sun Java u isticmaasho Linux, taasi waxay qaadataa wakhti in la cusbooneysiiyo. Gaar ahaan haddii aad isticmaasho Distros sida Debian. Kadibna sida caadiga ah ama soo ururi ama ku rakib buuga .debs. Sidaa darteed iyagu isuma cusbooneysiiyaan.
iska jooji uun fiilooyinka, looma baahna in la baabi'iyo
Maxay tahay ujeedka ah in qalab rakibid la rakibo oo la curyaamiyo?
In markii dhibaatada la xaliyo aad awooddo, waxaan qiyaasayaa in lagu cusbooneysiin doono balastarka.
in markay xalliyaan dhibaatada oo ay sii daayaan nooc cusub aad awood u siiso mar kale, waxay la mid tahay sida Juan Carlos u leeyahay mooyee sharooto, maadaama si kasta oo ay u saaraan ay u muuqato in dhibaatadu ay sii socoto.
Libreoffice waxay rakibtaa openjdk, kumana rakibto java, dhankaas dhib malaha, hada sida msx uu leeyahay, haa
Yupiiii, waan hubnaa.
Sidee ku saabsan openjdk?
Waxaan ahay mucjiso .. diyaar uma ihi inaan si sahal ah isku dhiibo 😛
Eeg ii cadee hal shay aniga, qaladkan ma saameynayaa openjdk? maxaa yeelay waxa aan ogahay inta badan Linux waxay adeegsadaan openjdk, maxaa yeelay wixii aan ka aqriyay waa bug ama oracle java error
Sida loo helo waxqabad ka fiican Steam-ka Linux